खप्तड : एक तान्त्रिक रात्रिभोज ~ जोगी जिन्दगी
7:40 PM घुमफिर, छापा लेखन, नागरिक, मिथक No comments
भोजको निम्तो ::
अच्छा गुरुले यसो गर्नु पर्यो ।
कसो गर्नु पर्यो ?
खप्तड काव्य यात्रा’मा मिसिन पर्यो ।
जिन्दगीमा यी ३ कुराको निम्तो नटार्नू भनी म आफैलाई बेलाकुबेला सम्झाइरहन्छु ः घुमघाम, दारुपानी अनि प्यार । घुमक्कड, पियक्कड र प्रेमक्कड मानिसको मन राखिरहनु पर्छ । त्यसो त आफूले नटेकेको भूगोलमा बहकिनु, पहाडी सालको दारु गिलासमा घरबुना नारेपा घुट्क्याउनु, बिझाउने बिस्तारामा मनमगन फरबिडन एप्पल चबाउनुमा मेरो आफ्नै फिल्डरेकर्ड छ । रुचिको फिल्डभित्रको सेल्फ रेकर्ड । घुमक्डक अमृत भादगाउँलेको एक नम्मरी निम्तो टारेर आफ्नै रेकर्ड खराब गर्ने कुरा भएन । बोरिया बन्तुरा कसेर तयार भइयो ।
दुई वर्षअघि बोलाएको हो खप्तडले मलाई । भनिन्छ नि तीर्थ त्यही मान्छे जान्छ जसलाई तीर्थले बोलाएको हुन्छ । परार साल पोखराकै दिवस कुँवर र म गन्तव्यमा खप्तड राखेर डडेल्धुरा, दिपायल, सिलगुढीका रनवनमा भौतारिएका थियौँ । हिउँदाका दिनमा खप्तड गइसाध्ये नहुने रहेछ । मौसमको ज्ञानबिनै कुदिएछ । एकाध दिन रल्लिँदा पनि मौसम सुधारिने संकेत नभएपछि हामी फर्केका थियौँ । खप्तडको निम्तो तिनताका ट¥यो । अब टार्न हुँदैन ।
'अमृत सुवेदी, तिमी तयार छौ नि ?’
अपेटाइजर अर्थात सन्दीपक ::
सोच्नुस् त, हाम्रा तीर्थहरू भौगोलिक रुपले विकट ठाउँमा मात्र किन बनाइएका होलान् ? हिन्दू मात्रै होइन बौद्ध, इस्लाम, इसाई, जैन आदि सबै धर्मका मख्य तीर्थहरू सम्झनोस् । अनि अहिलेको हवाई र सडक यातायातलाई भुलेर अनकन्टार विगतको कल्पना गर्नुस् ! चट्टाने पहाड, चिसा हिमाल, अभेद्य नदी प्रवाह, हिंस्रक जनावरले आवाद जंगल, प्यासिलो अनि रापिलो मरुभूमि ... । जीवनलाई नै दाउमा लगाएर मात्र पुरा हुन्थ्यो तीर्थयात्रा । तीर्थाटन सजिलो विषय थिएन । तीर्थाटन सजिलो विषय होइन ।
मेन कोर्स टु भैरव तन्त्र ::
तन्त्र भन्छ, ‘जसको मूलाधार चक्र सक्रिय छ उसको लिबिडो मस्त मोजिलो, भग्न भोगिलो हुन्छ । जसको स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय छ ऊ चाहिँ रंग रसिलो, वस्तु विलासी हुन्छ । मणिपुर चक्र तातेको मनुष्यको जीवन शक्तिसंकलनमा सार्थक हुन्छ । अनाहत चक्र सक्रिय हुने चाहिँ कि कवि हुन्छ कि प्रेमी हुन्छ कि पागल । विशुद्ध चक्र उठ्नेको मन्त्र हुन्छ ‘... धिक्कार होस् मकन बाँच्नु नराखी कीर्ति ।’ जसको आज्ञा चक्र चन्चले छ ऊ उत्सुक छ, छटपटे छ, केही न केहीको खोजमा दिमागको बारी खनखोस्री रहन्छ । सहस्रार चक्र सक्रिय भएको मानिसको लागि जिन्दगी एक खेल हुन्छ । लीला ।’
डिजर्ट उर्फ आकाश यात्रा ::
वन फर द रोड ::
त्यो गल्फ कोर्स जस्तै ‘फेयर’ कलिला घाँसे मैदान, ती झपुक्क यौवन सकेर झलिबसेका हिमाली बनस्पतीले छोपिएका झोता ! कवि हेमन्तका अनुसार खप्तडमा २२ वटा ठूला पाटन र ५२ वटा झोता अर्थात थुम्काहरू छन् । माइकास्थान, सहस्रार लिङ्ग, नागढुँगा, खप्तड बाबाको आश्रम, खप्तड दह, सीतापाइला, त्रिवेणी धाम, खापर दह, खुडुली, दुदुली, डाँफेकोट, त्रिवेणी, हरिना चरी, जेठी बहुरानी, छिन्तेढुँगा, केदारढुंगा, गणेशस्थान, माइका थान, घोडादाउन पाटन, नाचन्थली, बलेमेला पाटन, भलाउने पाटन, याइँ घट्ट छ्याइँ पानी, भीम घट्ट ... एकै सासमा भनेर टिप्न नसकिने कति ठाउँ छन् कति खप्तडभित्र । पुरै खप्तड घुमेको त मान्छे नै भेटिन्न भन्छन् गाउँलेहरू । सबै ठाउँका पौराणिक र स्थानीय किस्सा छन्, कथा छन् । महिमा छन् । ती अनेकन धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूमध्ये कति ठाउँमा हामी आफैँ पुगियो, कति ठाउँमा कवि हेमन्तले आफ्नो जीवन्त वर्णनमार्फत पु¥याइदिए ।
झिग्राना झंकार : ध्यान भर्सेस कल्पना ::
यो मेरो सोचाइ हो । भर्खरैको । यसलाई याद नगर्नू किनकी भोलि म अर्कै कुरा भन्दिन पनि सक्छु ।